Qalinkii C/lahi Bootaan Warsame: NABSI WAA MA BAAQDE QISADA C/LLAHI MISKIIN IYO JACFAR MA MAQASHAY | KALA SOCO – Wargeysyada ugu fiican ee Soomaalida ah ee bixiya warka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan.
Qalinkii C/lahi Bootaan Warsame: NABSI WAA MA BAAQDE QISADA C/LLAHI MISKIIN IYO JACFAR MA MAQASHAY
May 26, 2019 2:56 PM - Written by Warbaahinta AlloolNews
NABSI WAA MA BAAQDE QISADA C/LLAHI MISKIIN IYO JACFAR MA MAQASHAY
C/llahi miskiin wuxu ahaa nin faqiir ah oo dawarsada.Maalin maalmaha kamida ayuu garaacay guriga jacfar oo ah nin taajir ah.Waxa albaabkii ka furtay xaaskii taajir jacfar oo c/llahi miskiin markiiba waxtar weydiistay.
xaaskii taajir jacfar waxay ku tidhi ninkeedii aan xabad digaagad ah siino hase yeeshee waxaa ku gacan-saydhay taajir jacfar oo xaaskiisii ku amray inay albaabka degdeg usoo xidho. Muddo kadib jacfar iyo xaaskiisii way kal tageen islamarkaana jacfar xoolihii way ka duuleen oo wuxu isu bedeley nin miskiin ah oo waxba haysan oo dawarsada.Gbadhii waxay isbarteen nin taajir weyn ah oo markiiba guursaday.
Gabadha ninka guursaday waa c/llahi miskiin oo ilaahay wax siiyey oo taajir weyn noqday laakiin gabadhu ma garanayso balse c/llahi miskiin wuu garanayaa gabadha waxbase uma sheegin. Waa dambe ayaa gurigii taajir C/llahi waxa soo garaacay jacfar oo miskiin ah oo dawarsanaya;xaaskiisii hore oo hadda ah xaaska taajir c/llahi ayaa albaabka ka furtay oo markiiba garatay inuu yahay jacfar ayaa ku tidhi ninkeeda taajir c/llahi ninka in dawarsanayaa waa ninkii aanu kala tagnay.Taajir c/llahi wuxu ku yidhi xaaskiisa xabad digaagad ah sii.
Markii miskiin jacfar qaatay digaagadii ayuu taajir c/llahi xaaskiisii ku yidhi aniga miyaad i garanaysaa? markaasay ku tidhi maya.Wuxu ku yidhi waxaan ahay C///ahi miskiin lakiin anigu digaagadii waan siiyey. Nabse waa mabaaqde, Duniduna waa hadhka labada gelin
QQalinki maxamed suudi
Allool.com marnaba kama masuul aha aragtida Qoraaga iyo Ujeeddada uu ka leeyahay, Allool.com wax ay isu gudbisaa aragtiyaha kala duwan ee bulshada!!alinki maxamed suudi
Qalinki Cabdilaahi Bootaan Warsame